Top 10 Shabakadaha Helo Funny YouTube Comments
YouTube ayaa na la siiyey qaar ka mid ah madadaalada ganaax muddo sannado ah, tan iyo markii la bilaabay sannadkii 2005, waxa uu ku arkay dhalashada boqolaal "jiifka xiddigaha" kuwaas oo dhan warkiisa ku helay goobta video ah, ka Charlie qaniinay aan farta si NigaHiga, Smosh iyo PewdiePie. Waxa uu na baray waxyaalihii, celin music in ay u badan tahay in ay sii joogay ee la soo dhaafay iyo xitaa keenay warkiisiina wuxuu gaadhay in popstars ee maanta la Justin Bieber ayaa daboolka ka mid ah Chris Brown ayaa "aad Iyada oo" gaaray 45 million views iyo jiidanaya horseedana dareen pop. Da'yarka Ingiriiska Connor Maynard soo jiidatay dadkii ugu shaxda topper Ne-Yo iyo fanaanada Korean PSY arkay guul caalami ah oo uu hit "style Gangnam". Laakiin xiddigaha dhab ah, waxa ay leedahay in lagu sheegay in inta badan waa daawadayaasha ah, dhiibto iyo dib u eegista, fikradaha tiiraanyo leh iyo mararka qaar runta adag. Inta badan la kulmeen Southhampton ciyaar ka imaanaya meelaha ugu yaraan la filayo.
In this article aan ku qor doonaa 10 websites sare si aad u hesho comments funny YouTube online, hal wax ayaa qaarkood, kuwaas oo Commenter ee mudan Oscar ama laba naftooda.
Haddii aad u jecel YouTube oo aan ka heli kartaa oo ku filan oo ka mid ah YouTube comments u qosol badan oo whimsical Internetka hubi websites kuwan hoos ku qoran.
Qeybta 1: Top 10 Shabakadaha kaalinta Funny YouTube Comments
Qeybta 2: Top 10 xiisaha badnaa YouTube Comments
Mid ka mid ah goobaha ugu sareeya oo ugu aasaasay waa Epictu.be dhajinta qaybsama kooxda joogto ah iyo comments dhab ah madax- YouTube. Oo ay ku jiraan ugu fiican YouTube comments ee 2013 iyo wax ka badan, iyadoo awoodda ay u xubnaha bulshada si ay u wadaagaan xiisaha badnaa ee ugu comments madax- YouTube ay aragtay in ay marti ahaayeen on goobta video ah.
Home ugu wanaagsan ee bulshada internet-ka uu leeyahay si ay u bixiyaan qurbaan yimaado tumbler ah ee ugu fiican comments YouTube, ma fiicneyn sida firfircoon laakiin weli qaar ka mid ah entries quruxsan u qosol badan ka YouTubers kuwan.
Reddit guriga in Wararkii Ugu Danbeeyay ka r / showerthoughts in r / ciyaaraha ama r ah, / meel dhexaad ah oo xiiso leh, goobta jecel yahay nidaam ah oo soo socda ee "redditors" dadaalka badan, kuwaas oo si joogto ah ay gacan r / youtubecomments goobta, si fudud aad u soo gudbiso u gaar ah oo ay ku biiraan ee la wadaagidda. Beesha Reddit ogyahay waxa uu rabo, keliya ee ugu fiicnaa YouTube faallo ka dhigi doonaa mid!
Rafaa dhowaan image uploading Imgur taagan kale ay nidaamka rating gaar ah faalloonaya oo viral, aad muujinaya sanamyada viral ugu caansan ee maalinta, goobta sidoo kale gallery ah comments u qosol badan YouTube isugu wada ay bulshada.
Waa waxa ugu wanaagsan ee internet-ka sameeya iyo memecenter dhab ahaan ma niyad jabin. Waa maxay Macne samayn mayso si kastaba ha ahaatee waa kii aan jeclaan kittens! Waxa kaliya aanu macno looga samayn lahaa!
Ma heli karaa ku filan ee salka? Pinterest wuxuu hoy u yahay boqolaal qosol YouTube Comments, damaanad qaaday inuu ku siiyo saacadood oo xiiso baabi'iyaasha madadaalada. Haddii aad dhacay goobaha ay ka hor inta aadan sameyn doonaa si fiican si ay u helaan iyada oo kuwan.
Toosan ka barn ee kaftan, qaar ka mid ah ku darsaday fiican haddana mar kale ka soo jeeda bulshada darana u qosol badan YouTube.
8. Pleated jiinis
Pleated jiinis ilo lagu kalsoon yahay u kaftan ku taxan comments ay jecel YouTube, halkan waa mid aan ka soo gaaray.
Si aad u hesho comments YouTube funny guud ahaan waxaad ka raadin kartaa Tumblr oo isticmaalaya waxa ee xarunta tag si aad u ogaato dhammaan posts tagged leh "comments funny youtube", ku siinaya kumanaan ka badan faallo kooxda ka baxayaan bulshada YouTube ah.
10. 30 Best YouTube Comments ee waqtiga oo dhan - By Smosh
Mid ka mid ah ayaa la hubaa Smosh koriyo! In ka dhexeeya "cesspools carow ah cunsuriyadda iyo idiocy, Smosh aad keentaa 30 fiican ee YouTube comments 2013. Waxaa kale oo la odhan karaa 2014 ayaa doonaya in ay hal sano ah ee fasalka tayo A ka wordsmiths YouTube our.
Waxaa jira qaar ka mid ah majaajilaystayaal fiican on YouTube, wax badan si qaar ka mid ah ay ka dhigaan ka ugu naga mid ah oo ku nool riyoon karaa oo keliya ah. Sameynta waxa ay maalin walba jecel oo is handsomely waxay u bixisay waqti isku mid ah. Laga soo bilaabo videos guriga waalan kittens cute, faallo ciyaarta iyo wararka ka soo adduunka oo dhan, waxaa jira qof walba wax u. Iyadoo ay taasi jirto, si kastaba ha ahaatee, waxaa jira caddayn isa soo taraysa in majaajilaystayaal dhabta ah ma aha in xaqiiqda ah akhriyeyaal YouTube ama naftooda oo dhan videos ah. Siinta akhriyeyaal kulan oo ay lacag yihiin faaloodayaal ah, iyo iyaga oo aan niyad jabin. Siinta faallo fasalka waqti ka dib!
Bal aan ka heli toos ah, waxa uu. Halkan waxa ku jira 10 ugu xiisaha badnaa comments naga sareeya YouTube.
10. suunniyadaba sibxaday bogga hoos
Ha aad u neceb oo kaliya marka ay taasi dhacdo ...
9. Foshizzle aan nizzle!
Waxaad si fudud u diidi karin muuqashadii dembigooda ka ...
8. Yaa ma jecla kittens !?
Sidoo kale, marka ma eeyaha bilaabin isticmaalka kombiyuutarada ..?
7. faras Taasi !!
6. wadaraha badan ilaa internet runtii ...
5. ahaa in la filayaa in si dhab ah ...
Sidee ma uu arki karin waxa soo socda ...
4. dadka qaar waxa ay kaliya ku dhashay hibada leh awood gaar ah si aad u aragto wax kale oo naga mid kaliya ma awoodo ..
3. Liiska kama dambaysta ah ...!
Su'aasha jir da'da .. Just oo eeyaha ha ka soo !!
Run ahaantii 2. Youtube isu toogtay cagta by bandhigid saacad videos 10 ...
Just mahad naftaada aadan waxa uu leeyahay shaqo ah ..
1. Iyo guusha la geeyo ... marks Top in Yanis, xisaab fiican of music pop maanta.
Sidaas daraaddeed waxaa aad u ... The Top 10 xiisaha badnaa YouTube Comments hadda leeyihiin! Waa quruxsan cad runtii. Xiddigaha dhabta ah ee YouTube waa faaloodayaal ah. Ka fakar aad samayn karto si fiican? Noo soo sheeg adiga oo faallo YouTube jecel faalada ee hoose ...
> Resource > YouTube > Top 10 Shabakadaha kaalinta Funny YouTube Comments